Dinosaurs lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Free Online Games Dinosaurs mitondra antsika hiverina an-tapitrisany taona, mitondra ho amin'ny fiainana ny mahery indray mandeha dinosaurs izay nanapaka ny tany. Ary aoka ny olona dia tsy ela taorian'ny fanjavonana ireo olona goavam-be, dia manolotra ny hilalao miaraka aminy. Ny sasany hita goavana biby sy ny olona ho tafavoaka velona dia tsy maintsy miady amin'ny biby goavam-be. Ny hafa indray efa lasa ny namana sy ny namany, ary na dia manampy eo amin'ny fanorenana na ny ady ny tafika fahavalo. Fa indraindray dia ho ny excavate sy hanesorana sombiny ny taolany, avy eo mba hamerina ny taolana biby fahiny ka nataony tao amin'ny tranom-bakoka.
D-Day: Rush - Tower Fiarovana
Day D: Mahery ny fiarovana
Hazakazaka Dino fiara
Dino nihinana fihazana zava-baovao
Survival Active Vulcan
Dino Hunter: famonoana kofehy
Dinosaurs Ny atody maneran-tany 2
Dino Sakelidalana mitety tany
Dinosaure Coloring Book
Jigsaw mahafatifaty tsara tarehy
Ice Age Mampihomehy Dinosaurs Coloring
Ny Valentines dia mifantoka amin'ny fahasamihafana
Fanafihana dinosaur hunting dino
Ny fahavelomana Dinosaurs ny fiafaran'izao tontolo izao
Fahasamihafana dinôzôro mahafatifaty
Lalao Dinosaurs marevaka 3
Valan-javaboary mpanamory ala
Dinosaur Coloring mora foana ankizy
Lalao Dinosaurs tamin'ny Category:
Farany Dinosaurs lalao
Aza mikasika ny baomba Dino-baomba!
Dinosauro Pop It Jigsaw
Mandositra ny Jurassic Kid Plesiosaur
Little Dino Adventure Miverina 2
Jigsaw mahafatifaty dinôzôro
Lalao Online Rehetra Dinosaurs lalao
Tsy mahatsiravina lalao momba ny dinosaurs
Tsy inoana fa ianao no dia matahotra ny lalao an-tserasera momba ny dinosaurs. Na dia eo anoloanareo nitondra goavana androngo, indrafo mandrava izay rehetra andalovany sy nandrava trano ao an-tanàna, dia tonga saina fa izany zavatra rehetra ny mpandraharaha sy ny dinosaurs nanjavona tsy ho ambonin'ny tany ela be talohan'ny nahatongavanay. Milaza ny mpahay siansa izy ireo nanatri-maso ny fianjeran'i meteorites Ary ny fijery mahafinaritra loatra noho ny fomba fijery fa tsy nahay itoeran'ny tranga mahafinaritra, maty ny fahasambarana. Na dia izany aza, nisy ihany koa ireo izay afaka mampifanaraka ny fiovan'ny toetrandro, mutated ary tsy maty mandraka androany. Raha mijery ny androngo sy ny voay, izy ireo dia ho afaka maminavina ny razambeny. Nisy androngo kely tsy toa mampidi-doza, fa toy izany no, izay tsara kokoa ny tsy hiditra, toy ny androngo. Ireo, ka toy voay, fa ho velona any an-efitra, ary ny rambony no mandondòna na dia ny soavaly sy ny olona maty. Eny, ary ny nifiny dia mahery noho ny vy, ary afaka manaikitra antsika amin'ny tapany.
Next androngo eo amin'ny efijery
ny sarimihetsika, boky tantara an-tsary sy ny lalao video Mazoto fampiasana ny sary ny dinôzôro amin'ny vokatra – Godzilla, Loch Ness biby, ny sarimihetsika « Jurassic Park & ​​raquo; ny taranaky, sariitatra « Ice Age », ary ny olon-kafa. Ireo biby goavam-be mahery vaika hiala, dia aza malaina ny olona tsy misy fanantenana. Indrindra fa ireo mpandatsa-drà Tyrannosaurus Rex dia tsy mitovy, fa na dia tsy aingam-panahy herbivores fanantenana. Topazo maso ny taolan tao amin'ny tranom-bakoka. Manaraka ho azy ny sombin-kazo eo no mampiseho ny vovoka, izay tsy mendrika na dia mitandrina.
Ny realism ny lalao momba ny dinosaurs
Ao amin'ny MMORPG lalao no hiatrika ny tena mampatahotra dinosaurs indray mandeha ao amin'ny toeram-ponenana. Punch Atỳ hoditra dia efa azo atao. Ny tsy maintsy ho tonga mivantana amin'ny olona ela efa ho tapa tranombakoka, dia tsy maintsy manao zavatra ara-drariny. Toy ny tamin'ny lalao ity karazana nampiasa foana famolavolana sy ny teknolojia maoderina, ny sary hijery zava-misy sy mahatahotra. Ary ny zanany koa, dia hahaliana ny hilalao amin'ny aterineto tselatra lalao momba ny dinosaurs:
Raha mijery iray amin'ireo trano fisotroana kafe, dia ho hitanao ny fomba hanomana mitsiky dinôzôro burgers ka mivarotra izany amin'ny mpitsidika.
Kanefa ireo dia tia ny fanatanjahan-tena, ary mety ho hita matetika milalao baolina kitra, bisikileta, rollerblading sy ny fiara. Izy ireo handamina ny hazakazaka eo amin'ny tenany sy Manasa anao mba hiaraka amin'izy ireo.
koa, dia raiki-pitia, fa mila ny fanampiana, ary indray mandeha ao amin'ny firenena ny dinosaurs, dia hahazo mahafantatra ny solontenany hafa. Ny olon-drehetra dia be atao eo amin'ny raharaham-barotra – manangona ravina, nahira-tsaina mamaky boky na idling fotsiny. Ianao Cupid, izay mikendry ny hampiray ny mpivady, ary tokony tsy tara iray, mitifitra azy ireo ny fony zana-tsipìka.
Ary ny fitetezam-paritra any amin'ny laboratoara vola mpahay siansa, izay niara-niakatra tamin'i be dia be ny mampihomehy zavatra, nefa ny iray ihany toa ho tena nahaliana. Ny Bell Siny no mijery antsika sy Nano-dinôzôro toa tsy mampidi-doza tanteraka. Fa araka ny Hay, misy tsy mampino sy voraciously mandevona izay rehetra izany dia tsy ny habeny kely. Raha toa ka tsy matahotra, dia manomboka ny lalao.
Misy tantara epochs manana aura ny mahasarika ny olona sy ny zava-miafina. Anisan'izany – fotoana ny dinosaurs. Mahatsikaiky, dia tsy mahaliana ny biolojista sy zoologists, fa ho an'ny olona lavitra ny siansa. Dinôzôro tia te hianatra bebe kokoa momba ny fahitana, ny habeny ary ny sakafo fahazarana prehistoric ireo biby, toetra sy ny toe-draharaha ankehitriny izay nitoerany, ary pterodactyls Ceratosaurus hanatona sy mamorona ny layouts efa ho ny fiainana-habeny. Sy ny adihevitra tsy misy farany, napetrany handroso ny petra-kevitra mahafinaritra indrindra momba ny antony izy ireo ho lany tamingana. Just dinosaurs dia fantatra malaza mahery fo ny kolontsaina. Talen'ny ny horohoro sarimihetsika, rehefa reraka ny mifono zava-miafina rehetra, fitaovam-piadiana, dia niakatra ho any ny mpanatrika straschilku vaovao – Niaina fahagagana ny amin 'ny fotoana, na noforonina ho toy ny vokatry ny andrana ara-tsiansa goavana sitry mpiremby.
Mazava ho azy, fa ny olona no nametraka tena masiaka, ary mba hizaha toetra dia afaka handringana tanteraka ny tanàna manontolo. Ny tena mahery fo malaza amin'ny sarimihetsika maoderina dinozavroobrazny – Azo antoka fa ny Japoney Godzilla dragona. Dia, mazava ho azy, avo indrindra teknolojia, satria ny fototra taratra mandeha bibidia ary avy amin'ny vavany manidina mahafaty atomika andry. Fa izy – dinôzôro, izay efa nandalo ny mutation. Iny resabe iny dia ny Godzilla dia mbola misy fivavahana tany Japana. Zavatra tsy sarimihetsika orinasa Amerikana aza naka ny zo hitifitra ny sarimihetsika momba azy, araka ny efa nesorina « Godzilla: Final ny ady » Toa ho tsy mahay izy ireo kanônika.
Be itovizana ny an'ny Amerikana no Steven Spielberg « Jurassic Park & ​​raquo;. Tsy nomba azy, ary nanomboka ny farany dinosaurs onjam-hafanam-po. Noho izany tetikasa goavana momba azy ireo tsy. Ary izany dia tsy ho mutated biby, fa ny cloned Jurassic kopia mponina. Ny horonan-tsary ireo dia nampiseho ny fomba olona goavam-be mampidi-doza dia mety ho olona iray. Na raha tafiditra ao ny kely saina tahan'ny fitomboana, tsy lazaina intsony ny bloodlust ny sasany tamin'izy ireo. Ary ny vahoaka, nitarika fotoana betsaka kokoa eo anoloan'ny efijery ny Monitors, tsy mampaninona milalao lalao an-tserasera momba ny dinosaurs. Ny mpandraharaha goavana ireo androngo amin'ny fatra tsara ny hatsikana, mampiseho ny indraindray fa mahafatifaty dinosaurs, fa izay mba hikarakara na manampy azy mba hanao asa isan-karazany. Mazava ho azy, dia tsy afaka manao izany ampahany ny lalao ary tsy mpitifitra sy brodilok. Dinosaurs ho tonga soa aman-tsara ny Mpandray anjara ny lalao efa misy karazana sy ny tari-dalana.